Juicy Air Fryer Meatball (Friendly ho an'ny frizera!) - Fomba Fanamboarana
fomba fahandro makaroni sy fromazy voaendy
mandra-pahoviana no hisitrika ny tongolo
crepes blueberry miaraka amin'ny famenoana fromazy fanosotra
Sakafo Fryer Juicy Air Fryer
Tianay ireo henan-dranomasina Air Fryer Meatball matsiro izay natolotra niaraka tamin'ny saosy paty tianay na koa tao anaty zaridaina hena!
Ny henan'omby sy ny henan-kisoa dia ampifangaroina amin'ireo tsiro italianina tianay indrindra mahatonga ireo manaikitra be ireo hahafinaritra ny vahoaka! Mitsitsia ara-potoana, diovy, ary na ny kaloria aza, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fryer!
Ny henan'ny Air Fryer dia marihitra ety ivelany ary be ranony anatiny!
Air fryer dia mahandro haingana (Manana aho ity fryer rivotra eto ) , ireto henan-kena ireto dia handrahoana saika amin'ny fotoana handrahoana ny paty ao aminao. Afanaina ny sasany saosy marinara nahazo ny tonga lafatra ianao Spaghetti sy Meatballs sakafo hariva!
Ireto henan-kena ireto dia tsy tokony ho sakafo fotsiny, fa tsara ho an'ny tsakitsaky na ho mpamatsy sakafo ihany koa!
hena Ny hena no ampahany lehibe indrindra amin'ny rehetra nahandro hena tsara ! Ny henan'omby sy henan-kisoa totoina no mifangaro tsiro ary manome antoka fa be ranony izy ireo.
zavamanitra Ny zava-manitra italiana miaraka amin'ny vovoka Parmesan sy tongolo no tianay indrindra. Tiako ny vovo-tongolo ao amin'ity fomba fahandro ity satria mahandro haingana izy ireo ary ny tongolo manta dia mety tsy hanana fotoana handrahoana araka ny tokony ho izy.
mandra-pahoviana no haharetan'ny tantely tantely
EGG & BREADCRUMBS Ny atody sy ny mofomamy dia mitazona ny zava-drehetra.
Fomba fahandro ny henan'akoholry
Atambaro ireo akora rehetra.
Volavola sy toerana ao anaty harona Air Fryer.
Andrahoy araky ny fomba fahandro etsy ambany.
Avelao hipetraka minitra vitsivitsy ny henan-kena alohan'ny hanompoana azy.
Ny Air Fryers dia mety miova kely, jereo ny henan-kena mandritra ny roa minitra mialoha mba hahazoana antoka fa tsy misakafo be loatra izy ireo. Ny henan-kena dia tokony ho 165 ° F ao afovoany.
Inona no hanompoana amin'ny henan'omby Fryer Air
Mora mipoitra anaty lasopy na lasopy ny henan-kena vaovao na mangatsiaka. Tena tianay izy ireo ao amin'ny anay Spaghetti carbonara na Lasopy mariazy italiana . Aza adino ny sasany Chest mofo . Afangaroy ny mamy misy tsiro Salady natsipy ary aroso ny sakafo hariva!
Ataovy ao anaty fitoeram-pandehanana tsy voafehin'ny rivotra na kitapo misy zippera ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 4 andro ary ao anaty vata fampangatsiahana maharitra iray volana, ny hena sisa tavela.
Afanaina indray ny hena amin'ny alàlan'ny famolahana microwave azy ireo iray minitra isaky ny avo mandra-pahatonga azy ireo hafanana, na apetraho eo amin'ny lovia fanaovana mofo ary apetraho ao ambanin'ilay broiler mandritra ny minitra vitsivitsy mandra-pahatonga azy ireo ho malemy indray.
Bebe kokoa amin'ny Air Fryer Favorites
Air Fryer Steak - malefaka sy be ranony
Trondro sy sifotra fiaramanidina - ankafizin'ny fianakaviana
Elatra akoho amam-borona - vonona ao anatin'ny 30 minitra
Tender akoho amam-borona - tonga lafatra amin'ny fanobohana
Air Fryer Pork Chops - Fotoana fandrahoana 12 minitra
Tian'ny fianakavianao ve ireo Air Fryer Meatballs ireo? Aza hadino ny mametraka hevitra sy naoty etsy ambany!
Fotoana fanomananadimy ambin'ny folo minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo12 minitra Fotoana manontolo27 minitra Fanompoana16 henan-hena MpanoratraHolly Nilsson Voaravaka amina mofomamy sy Parmesan, malefaka sy mahasosotra ireto Air Fryer Meatballs ireto! pirinty Pin
▢½ farantsanao henan-kisoa mahia
▢⅓ kapoaka sombin-mofo efa matsiro
▢rOA tablespoons ronono
▢1 sotro fromazy parmesan grated
▢½ sotrokely Zava-manitra italiana
▢½ sotrokely vovoka tongolo
Atambaro ao anaty lovia antonony ny akora rehetra ankoatra ny hen'omby sy ny henakisoa. Afangaro tsara.
Ampio hen'omby sy henan-kisoa ary afangaro mba hanambatra. Mizara 16 hena meatballs.
Preheat fryer ny rivotra hatramin'ny 400 ° F.
Apetaho amin'ny hena tokana ao anaty fryer ny hena meatballs. Avereno midina hatramin'ny 380 ° F ny fryer.
Mahandro hena meatball mandritra ny 12-14 minitra na mandra-volontany ary mahatratra 165 ° F ny afovoan-hena.
Mialà sasatra 3 minitra alohan'ny hanompoana.
Ny Air Fryers dia mety miova kely, jereo ny henan'olon-droa minitra vitsivitsy mialoha mba hahazoana antoka fa tsy misakafo be loatra izy ireo. Ny henan-kena dia tokony ho 165 ° F ao afovoany. Ataovy ao anaty fitoeram-pandehanana tsy voafehin'ny rivotra na kitapo misy zippera ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny 4 andro ny hena ambin-kena ary ao anaty vata fampangatsiahana maharitra iray volana.
Kaloria:114,Karbohidraty:rOAh,Proteinina:9h,Tavy:8h,Tavy mahavoky:3h,Cholesterol:40levitra,Sodium:143levitra,Potasioma:139levitra,Fibre:1h,Sugar:1h,Vitamina A:65IU,Vitamina C:1levitra,Kalsioma:roa-polo ambylevitra,Vy:1levitra
Teny lakileAir Fryer Meatballs, fomba fahandro Air Fryer Meatballs, Meatball Air Fryer tsara indrindra, ny fomba fanaovana Meatball Air Fryer Mazava ho azyAir Fryer, Appetizer, Beef, Dinner, Entree, Main course, henan-kisoa masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .